Blọọgụ, Clogs na Akụkọ Akụkọ | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 12, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Brian Clark metụrụ ihe aka na di na nwunye ikpeazụ ya posts na copyblogger nke m chere nwere ike ịbụ 'njikọ na-efu' maka Akaụntụ Blog (Ndekọ)… Kọọ Akụkọ ahụ.
Edeela m di na nwunye posts ndị ahụ dị oke egwu nke blọọgụ ụlọ ọrụ. Ihe kpatara ya bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ntanetị nwere ike ịbụ ihe ikuku ikuku. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ele blọgụ dị ka mgbatị nke mbọ ahịa ha, yana websaịtị, mgbasa ozi, na mbipụta akụkọ. Ulo oru ndi ozo na-arigo ugbua 'ahia ahia ohuru a'. Ọchị! IMHO, blọọgụ ekwesighi ịbụ maka ịzụ ahịa, ha kwesiri ịbụ n'ezie maka ịmepụta mkparịta ụka gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị - ndị ọrụ, ndị ahịa na / ma ọ bụ atụmanya.
Ndụmọdụ Brian na ndenye di na nwunye ikpeazụ ya bụ na ọ bara uru iji kọọpị gị kọọ akụkọ, enwere ike ịgbatị ya na blọọgụ gị. Lee echiche dị egwu! Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịmalite atụmatụ a. Otu akụkọ nwere ike ịbụ eziokwu, mkpa na oge. Otu akụkọ nwere ike igosipụta ike nke ụlọ ọrụ gị na-enweghị ntinye mgbasa ozi mara mma ma ọ bụ nkwupụta mgbasa ozi. Na story akụkọ nwere ike ịbụ mmalite nke mkparịta ụka dị egwu n'etiti ụlọ ọrụ gị na ndị na-agụ blog gị.
Akụkọ akụkọ nwere ike ịbụ atụmatụ zuru oke maka ụlọ ọrụ gị blog, na-ezere nsụgharị azụ nke ezi obi na tupu akwadoro ntabi.
Kọọ akụkọ gị. Gwa ndị ahịa gị akụkọ. Ọbụna kọọrọ gị atụmanya 'akụkọ.
Jul 21, 2007 na 7: 05 AM
ọ dị nwute na nke ahụ bụ nzọụkwụ ọzọ m na ịde blọgụ…. na ịkụ nzọ nnukwu ego na ya 😛 . a na m atụ anya na ọ bara mbọ m ike….